Nhungamiro yekushandisa Instagram uye maHashtag ayo | IPhone nhau
Mutungamiri wekushandisa Instagram uye maHashtag ayo
Alejandro Cabrera | | IPhone maapplication
Social network Instagram chirongwa chakasununguka chemahara iyo inokutendera iwe kugovana mafoto uye mavhidhiyo mavhidhiyo nema hashtag kubva kune yako smartphone. Kuvhurwa kwayo kwaive muna Gumiguru 06, 2010 uye kubva muna Kubvumbi 09, 2012 yakava iyo pfuma yeFacebook. Instagram inopa nzira yakapusa yekubatanidza vanhu pasirese kuburikidza nemifananidzo yako. Nekubata kamwe chete kwebhatani, unogona shandisa mapikicha kubva kufoni yako pane iyo Instagram app, pamwe nekwanisi yekugovana pane zvakabatana masocial network senge Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, uye Foursquare.
1 Instagram inoshanda sei?
2 Iwe unogadzira sei Instagram account?
3 Ndiani anogona kuona angu Instagram zvinyorwa?
4 Ndinogona here kugadzirisa mapikicha angu ndisati ndagovera?
5 Ndeapi Instagram Hashtags uye maitiro ekuishandisa?
6 Ndekupi kwekuwana anonyanya kufarirwa Instagram Hashtags
7 Hashtags dzakarambidzwa ne Instagram
Instagram inoshanda sei?
Kunge Facebook ne Twitter, Instagram yakavakirwa kutenderedza kuve neshamwari kana vateveri. Paunotumira mufananidzo kana vhidhiyo pa Instagram, inozoonekwa paprofile yako uye pane yako vateveri 'nhepfenyuro yenguva. Nenzira imwecheteyo, iwe unozogona kuona zvinyorwa zvevanhu vaunoteedzera mune yako wega nhepfenyuro yenguva.
Kudyidzana nevamwe vashandisi kuri nyore, unogona bata mufananidzo wemumwe munhu uye unofarira kana kuwedzera komendi pasi pemufananidzo.
Kana iwe ukabaya paprofile yemumwe munhu, unogona kuona zita ravo rekushandisa, pikicha yepikicha, huwandu hwemifananidzo nemavhidhiyo avakaisa, nhamba yevateveri vavanavo, uye nhamba yevanhu vari kuvatevera.
Iwe unogadzira sei Instagram account?
Dhawunirodha iyo app yeApple mahara pane yako smartphone kubva kuApple Chitoro. Ipapo unogona kunyoresa iyo account nekugadzira zita rekushandisa uye password. Iwe unogona zvakare kuita izvi neyako iripo Facebook account kana kushandisa yako email. Kamwe wakanyoreswa, iwe unogona ikozvino kuwedzera iyo foto pikicha uye ipfupi bio.
Ndiani anogona kuona angu Instagram zvinyorwa?
Zvose Instagram mapikicha ari pachena neruzhinji, zvinoreva kuti chero munhu anogona kuzviona. Nekudaro, iwe unogona kuita kuti yako nhoroondo ive yakavanzika kuitira kuti zvinyorwa zvako zvionekwe chete nevateveri vako.
Kutsvaga vanhu vekutevera kuri nyore. Paunotanga kugadzira account yako, unogona kuwedzera shamwari kubva kune yako Facebook network kana kubva kubhuku rekero renhare yako. Iwe unogona zvakare kudzvanya paKutsvaga (iyo yekukudza girazi icon) seizvi iko kunyorera kuchakukurudzira kuti uone mafoto nemavhidhiyo evanhu vakasiyana, asi iwe unogona zvakare kushandisa yekutsvaga yekutsvaga kutsvaga vashandisi kana mameseji anogona kukufadza.
Unogona kudzvanya pane bhatani rekuti "Tevedza" iro rine account yega yega uye unozotanga kutevera mushandisi, asi kana akaundi yavo yakagadzirirwa kunge yakavanzika, mushandisi anozofanira kubvumidza chikumbiro chako kuti utange kuvatevera.
Ndinogona here kugadzirisa mapikicha angu ndisati ndagovera?
Imwe yeakanakisa maficha e Instagram ndeayo muunganidzwa wemifananidzo mafirita izvo zvinokutendera iwe kuti ushandure pikicha yakatorwa pafoni yako, kuita chimwe chinhu chakakodzera kugovana. Yega yega firita mubatanidzwa wekugadzirisa kwemifananidzo, iwe unogona zvakare kupa manyore kugadziridza kumufananidzo senge kupenya, kusiyanisa, kuzadza, kudziya, kupinza uye zvichingodaro. Semuenzaniso, iyo Lark firita inovhenekera pikicha yako uye inosimbisa ese ayo mavara kunze kwekutsvuka, nepo Reyes firita ichiwedzera kutaridzika kutarisa. Naizvo unogona kurima uye kururamisa mifananidzo yako ne Instagram usati wavagovana.
Ndeapi Instagram Hashtags uye maitiro ekuishandisa?
Kunyanya maHashtags (#) anoshandiswa kuronga zvemukati mukati mekushandisaIzvi zvinoreva kuti kana iwe ukabaya pane Hashtag iyo nguva yenguva inongoratidzira zvese zvinyorwa izvo zvinotakura iwo chaiwo maHashtag uye uye ichaodha izvo zvemukati kutanga neazvinyowani.
Asi zvinosuwisa, kune vanhu vazhinji vanoita kunge vasinganzwisise iyi nyowani tsika inoshandiswa mumasocial network. Vanoshungurudza maHashtag nekuti vanofunga kuti ivo pavanonyanya kushandisa muchinyorwa, vanowedzera kutarisisa kubva kuvashandisi uye ivo vanotenda kuti vanozove nekushanya kwakawanda kune kwavo zvemukati. Kunyange zvakadaro, zvinoratidzwa kuti kushandisa zvakanaka hashtag kunogona kubatsira uye inowedzera chiono chezvako zvemukati, asi mushandi akaipa anogona kupedzisira ari mune yakapesana.
Iko kushandiswa kweHashtags kwakakosha kwazvo kupa kuti kuonekwe kune rakaburitswa pikicha kana vhidhiyo, zvakakoshawo kwazvo kugadzira bhuku rine zvinyorwa zvinopa hunhu uye zvinoenderana nezviri kutsikiswa.
Ndekupi kwekuwana anonyanya kufarirwa Instagram Hashtags
Iko kune maitiro uye analytics yeiyo Instagram iyo inopa iyo Akanyanya kufarirwa ma hashtag pasi rose, nemusoro wenyaya, nedunhu, nezvimwe. Kune zvakare akawanda mapeji kubva kwatinogona kuwana runyorwa rwemaki aya, imwe yeanonyanya kuzivikanwa is Websta, iyo inotiratidza maHashtag anozivikanwa ari pa Instagram. Kune zvekare mafomu anokubvumira kuteedzera iwo mavara kuti ukwanise kuanamatira zvakananga mumabhuku edu. Heano mamwe emabasa aya:
Hashtags ne PreGram: Hashtag Manager we Instagramvakasununguka
Hashtags dzakarambidzwa ne Instagram
Instagram inzvimbo yekudyidzana yakagadzirirwa mhuri yese uye vanoikoshesa. Instagram haigamuchire zvinyorwa zverudzi rwepabonde (izvi zvinosanganisira kushama, kuita bonde rakajeka, nezvimwewo), ndosaka vashandisi vazhinji vasiya social network, nekuti havagovane pfungwa iyi. Instagram zvakare inotarisisa mukushandisa kwakanaka kweHashtags pa Instagram, ndosaka varipo Mahashtag ayo asingakurudzirwe kushandisa kana pane zviripo zvimwe zvinorambidzwa ne Instagram.
Izvo zvakakosha kuti kana uchitsikisa pikicha kana vhidhiyo, maHashtag ane hukama neicho chinyorwa akapinda, kubvira Instagram inobvisa zvisina kukodzera kana zvisiri-zvemazita mavara kubva pasocial network chero kune vashandisi zvine chekuita nechinyorwa. Kune mamwe maHashtag akabviswa ne Instagram, nekuti iwo asingape ruzivo kune vashandisi, senge #Iphone, #Photography, #Popular, #Instagram, nezvimwe. pamwe nevese vane chekuita nebonde uye zvinodhaka.
Usashandise Hashtag mushoko rega rega repositi yako (#iiyi #i #an #muenzaniso)
Usanyora marefu hashtags
Usashandise Instagram Hashtag kutsanangura hafu yepositi yako
Usanyora maHashtag asina hukama nepositi yako
Usashandise zvisiri izvo ma tag mune ako mapositi
Usashandise akaomesesa kana asingazivikanwe ma hashtag
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mutungamiri wekushandisa Instagram uye maHashtag ayo
Mapikicha matsva kubva kuWWDC 2016